Uyayenza into yakhe uDJ Fresh kuMetro | Isolezwe
Uyayenza into yakhe uDJ Fresh kuMetro
ezemisakazo / 16 May 2017, 10:08am / FANELESIBONGE BENGU
UDJ Fresh owethula uhlelo iFresh Breakfast ngo-5 kuya ku-8 ekuseni phakathi nesonto kuMetro FM. Yena nethimba lakhe bayawushaya umsebenzi
CHA bafowethu nodadewethu asimvume uDJ Fresh nethimba lakhe lohlelo lwasekuseni kwiMetro FM ngokuthi benza umsebenzi oncomekayo.
UDJ Fresh usakaza iFresh Breakfast njalo ekuseni phakathi nesonto kuMetro.
Uma kukhulunywa ngezinguquko ezenziwa emisakazweni iMetro yazuza kakhulu ngoDJ Fresh.
Isikhala esivuleke kuhamba uGlen Lewis no-Unathi Msengana ababesohlelweni lwasekuseni phambilini usivale thaqa.
Okumnandi ngohlelo lukaDJ Fresh wukuthi uthi uqala usuku ube wenele emva kokululalela. Uthola amancoko, ulwazi nomculo omnandi nengicabanga ukuthi yizona zinto eziwumgogodla wanoma yiluphi uhlelo lwasekuseni.
Angikholwa wukuthi kuyasiza ukuthi uvule uhlelo lwasekuseni uthole amahlaya kuphela ekubeni ungazi ukuthi kwenzekani ezweni sakhile. UFresh ngoMsombuluko uvele alande usomahlaya uTats Nkonzo akubulale ngehlaya kuphume konke ukucasuka osuke unakho uma kuqala isonto.
Ungamthatha njengokuthi unguDJ ohambela emakilabhini kanti emqondweni uqaqekile futhi uyazazi izinto.
Akanqeni ukuthi avele akulandele umuntu othize akhulume ngesihloko esibalulekile. Ngikhumbula nje njengoba kade kunengqungquthela yeWorld Economic Forum eThekwini, nakulona lolu hlelo kwakhulunywa ngayo njengomlaleli saqonda ukuthi iyini nokuthi kwenzekani kuyona.
Uma ufuna umculo omnandi ayikho enye indawo ongaya kuyona ngaphandle kwalolu hlelo.
Uphinde alande nosaziwayo abehlukene akhulume nabo aphinde adlale nabo imidlalo emoyeni. Lokhu kuzosiza nasekutheni kunyuke isibalo sabalaleli ngoba osaziwayo bayasho ezinkundleni zokuxhumana ukuthi bazobe besemsakazweni bese abalandeli babo beyalalela.
Eqinisweni vele uFresh umsakazo yinto ayaziyo njengoba ngaphambi kokujoyina iMetro ubevele esohlelweni lwasekuseni kwi-5FM futhi uke waba sohlweni lwantambama kusona lesi siteshi. Naku-YFM futhi uke walusakaza uhlelo lwasekuseni.
Akukhona nje ukuthi abaphathi beMetro bamqashe ngoba nakhu engusaziwayo ukuze alethe abalandeli bakhe babe ngabalaleli kodwa bamthathele namava akhe.
Okunye okuhle wukuthi ubukhona bakhe buzomsiza kakhulu uSomizi ngokuthi afunde ngomsakazo. Okungichaza kakhulu ngoSomizi wukuthi uyayazi indawo yakhe akavele nje akhulume. Uyakuqonda ukuthi uhlelo ngolukaFresh yena uyasiza nje.
Angingabazi ukuthi eminyakeni ezayo uzozitholela olwakhe uhlelo bese esebenzisa lonke ulwazi aluncela kuFresh.
Uma ungakaze umlalele uFresh ake uzinike isikhathi, uzozizwela.